Miasa maimaimpoana? Antony nahoana no eny hanaovana azy | Famoronana an-tserasera
Azo antoka fa efa nandre momba ny tolo-kevitra momba ny “miasa maimaim-poana”, Ka ahoana ny fanovanao ny lalao ary manomboka mahita maromaro amin'ireo fangatahana ireo ianao toy ny hoe tena izy ireo asa tsara?
Amin'ity lahatsoratra ity dia te-hampiseho aminao hevitra maromaro izahay mety hanampy betsaka, izay hamakafakainay ny tranga tsirairay asa maimaim-poana ka manakarama anao im-betsaka izy ireo.
1 Raha mangataka vola aminao ny asa tokony hatao
2 Raha manome anao fahalalahana hamorona sy hanao andrana ny asa
3 Raha valiny dia azonao atao ny mahazo traikefa samihafa
4 Raha toa ka miasa manohana antony iray inoanao ny asanao
Raha mangataka vola aminao ny asa tokony hatao
Mampiahiahy izy raha toa ka misy fampiasam-bola ho an'ny fanontana ny asa fa tsy fanatsarana izany na izany aza. Araraoty raha manambatra ny asanao izany.
Mieritrereta fitaovam-pitaterana tsara na facade fivarotana vita tsara, tokony ho izy zavatra azo tsapain-tanana azo sary, amin'izay fotoana hanararaotanao azy ireo hampahafantatra ny asanao, izay mety ho fampiasam-bola tsara.
Raha manome anao fahalalahana hamorona sy hanao andrana ny asa
Amin'ity tranga ity, raha hitanao fa misy ny fahafaha-manao andrana amin'ny loko; collages; miakatra; Famokarana sary; endritsoratra hafa; sns., mety mety ho fampihetseham-batana mahaliana tsara izay azonao atao mikaroha teknika samihafa ary tsy "harafesina" noho ny fanaovana zavaboary mitovy foana.
Raha valiny dia azonao atao ny mahazo traikefa samihafa
Misy faritra sasany efa nianaranao, na izany aza, tsara foana izany mampihatra azy ireo rehefa manatanteraka ny tetikasan'ny mpanjifa, mba tena hahazo traikefa.
Ohatra maromaro no mety amin'ny faritra toa ny famolavolana serivisy, famolavolana signage ho an'ny orinasa lehibe, famolavolana interface, sns.
Amin'ity tranga ity dia tsara ny torohevitra ataovy mazava fa te-hanatanteraka tetik'asa fanatsarana ianao miaraka amin'ny orinasa voalaza ary manara-maso ny valiny. Raha tsapanao fa manome karazana fiverenana miabo ity asa ity dia mety ho safidy tsara azo izany traikefa bebe kokoa amin'ny fiainanao matihanina, izay hahafahanao "manamafy" ny fahalalana anananao.
Raha toa ka miasa manohana antony iray inoanao ny asanao
Eritrereto fotsiny ny fanatanterahana anao manokana izay ho tsapanao fa manana fahefana jereo fa nanampy be ny asanao hahatratra ny tanjon'ny tanjona inoanao. Tsy misy isalasalana fa traikefa tsy voavidim-bola ity.
Araka ny efa tsapanao, miasa maimaim-poana dia manana firakofana volafotsy izay afaka manampy be dia be amin'ny fampiofanana arak'asao, ankoatr'izay dia ahafahanao mampitombo ny fahitana anao eny an-tsena sy ny fotoana atolotra anao, satria manao asa maimaim-poana ianao dia efa mpandresy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Miasa maimaimpoana? Antony nahoana no eny hanaovana azy
Coca-Cola sary famantarana iray izay velona amin'ny fandehan'ny fotoana
Fa maninona no misy fampahalalana ifanakalozan-kevitra izay mora, mazava ary mora raisina?